ချာတူးလန် မြန်မာစစ်ကားများ (ဒေါက်တာ ကိုကိုဦး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ချာတူးလန် မြန်မာစစ်ကားများ (ဒေါက်တာ ကိုကိုဦး)
ချာတူးလန် မြန်မာစစ်ကားများ (ဒေါက်တာ ကိုကိုဦး)
Posted by စဆရ ကြီး on Feb 5, 2013 in Facebook | 11 comments
ပြန်တွေးကြည့်ပါ သမိုင်းမှာတကယ်ရော ဒီလိုတွေဖြစ်ခဲ့လား။ (၁၉၄၄) ခုနှစ် ဂျွန်လ (၆)ရက်နေ့ ဂျာမန်တို့ အရှုံးကြီးရှုံးနေချိန် အရှေ့ဘက်မှ ရုရှတို့တင့်ကားနှင့်လိုက်ကြိတ်သလို တလှိမ့်လှိမ့်တက်လာပြီး ဂျာမန်တို့၏ တပ်မဟာများ တခုပြီး တခုပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းနေချိန်တွင် အနောက်ဘက် အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားမှ အမေရိကန် နှင့် အဂ်လိပ်တပ်များ နော်မန်ဒီကမ်းတက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည်။ D-day တွင် Omaha, Utah နှင့် ဓါးကမ်းခြေများမှ ရေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူ အသာစီးအင်အားနှင့်ဝင်တိုက်တော့သည်။ ထိုကမ်းခြေများမှာ ဝေးလွန်းသဖြင့် ဂျာမန်ဗိုလ်ချုပ်များမှ ထင်မထားသောနေရာဖြစ်သည်။ စစ်အင်အားကြီး မဆိုထားဘိ ခုခံကာကွယ်ရန်လေယာဉ် ၂ စီးသာထားထားသည်။ စစ်သင်္ဘောများပစ်ခတ်မှုနှင့်ပင် မြေပြင်မှာမွစာကြဲနေပြီဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူပင်တက်သိမ်းနိုင်လေသည်။ မကျဘူးတော့မဟုတ် စစ်ပွဲစဉ်တခုလုံး စစ်သည် ၃၀၀၀ ကျော်ကျသည်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်တွေပဲတော့ မဟုတ်။ အင်္ဂလိပ်တပ်တွေလဲ ကျသည်။ သို့သော် ရုပ်ရှင်ထဲတွင် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကို မတွေ့ရ အားလုံးအမေရိကန်တွေပဲ ဖြစ်နေသည်။ ဂျာမန်တွေဘက်က ပိုဆိုးသည် ထိုတိုက်ပွဲများတွင်ပင် မဟာမိတ်တွေကျတာထက် ၂ဆမက ကျဆုံးသည်။ ရဲဘော်မပြောနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ပင် ၃၀ ကျော်ကျသည်။ ဘန်ကာများထဲတွင် အရှင်လတ်လတ်မီးတိုက်ခံရသည်။ ဆုတ်ခွာရချိန်တွင် ရိက္ခာပြတ်ကာ လူသားပင်စားရသည်ဟူ၏။ ထားတော့ ပြောရင်း ပြောရင်း ဘာလင်သိမ်းတိုက်ပွဲအထိရောက်သွားတော့မည်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီဇာတ်ကားနဲ့တင် အင်္ဂလိပ်တပ်များ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တာတွေ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ရသည်။ ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ကန့်ကွက်သည်။ သို့သော် ဟောလိဝုဒ်က ရှင်းရှင်းပဲပြန်ပြောလိုက်သည် ငါတို့လိုရိုက်နိုင်လျှင်ရိုက် မရိုက်နိုင်လျှင် ပါးစပ်ပိတ်… ။ ရှင်းသည်။
ကဲ ထားတော့ ဒါက အမေရိကန်ကို အပုတ်ချချင်လို့မဟုတ်။ Media ရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းပုံကို ဖေါ်ပြတာပါ။ ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး မီဒီယာ နိုင်ငံကြီးကို ဥပမာအရင်ပေးထားတာ။ ဒါဆို ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ပြန်ကြည့်ရအောင်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ကျန်စစ်သား၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းဘုရား စသဖြင့် အင်အားကြီးစစ်ဘုရင်များစွာရှိခဲ့သည်။ ယင်းတို့ အင်အားကြီးမားပုံကို နိုင်ငံခြားခရီးသွား တစ်ယောက်၏ မှတ်တမ်းတွင် “မြန်မာစစ်ဘုရင်၏ အင်အားကားကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှ၏ စစ်သည်အင်အားမဆိုထားဘိ စစ်ကြောင်းဖြင့်လိုက်ပါလာသော ခ၀ါသည် သည်ပင် သောင်းချီသည်” ဟုဖေါ်ပြထားသည်။ (ကိုးကား ရန်ကုန်ဘဆွေ- ရွှေဝါပြည်) ။ သို့သော် ယနေ့ခေတ်ကလေးများကို ကျန်စစ်သားအကြောင်းပြောပြလျှင် ပိန်ညှောင်နေသော ခနာကိုယ်နှင့် စက္ကူချပ်ဝတ် တန်ဆာများဝတ်ဆင်ကာ မဏိစနာ အား မခိုးမခန့်မထီတထီ လုပ်နေသော ရုပ်ပုံကိုသာလျှင်မြင်ယောင်ပေတော့မည်။ ထိုအပြင် စစ်ဘုရင် ဆိုသူကြီးများမှာ လူလေး ငါးမြောက် ငါးခြောက်နှင့် မြင်းပတ်စီးပြီး လူနှင့်မလိုက်သော (ပလတ်စတစ်ကြိုး နှင့်ပတ်ထားသော) လှံကိုကိုင်ထားကာ စက္ကူ ချပ်ဝတ်များ ၀တ်ထားသော လူဖလံလေးများဟုထင်မြင်လာပေတော့မည်။ ထိုထက်ဆိုးသည်ကား နန်းတော်ဆက်တင်များပင်ဖြစ်ချေသည်။ သုံးထပ်သားကို ဆေးသုတ်ကာ ထောင်ထားပြီး တက်ထိုင်နေသော ဘုရင် ဆိုသူအား မည်သို့လေးစားရမည်နည်း။ ဓါးကား ကျောက်တုံးဖြတ်ရန်ဝေးစွ အတုကြီးမှန်းသိသာနေသည်။ ကျန်ကျောင်းနှင့် ကျန်စစ်သား ချလျှင်မည်သူနိုင်မည်နည်းမေးကြည့်ပါ။ ကျန်ကျောင်းနိုင်မည်ဟု ကလေးတိုင်းကပြောကြပေမည်။ ယိုးဒယား သမိုင်းကားများကို ရှုလော့။ မြန်မာဘုရင်သည် ever ဗီလိန်ဖြစ်သည်။ ယုတ်မာကောက်ကျစ် ကူလီကူမာလုပ်သည်။ သို့သော် ယိုးဒယားဇာတ်ကားများထဲမှ မြန်မာဘုရင်သည် မြန်မာဇာတ်ကားများထဲမှ မြန်မာဘုရင်ထက် များစွာသားနားလှသည်။ စစ်သည်အင်အားများစွာ ကြောက်မက်ဖွယ်စစ်ဆင်များ စစ်မြင်းများ ကိုစီးကာ ချီတက်လာပုံမှာ များစွာအားကျဖွယ်ကောင်းလှချေ၏။ ကြံဖန်ကာ ဂုဏ်ယူမည်ဆိုလျှင်တော့ ဂုဏ်ယူစရာပင်။ တို့ဘုရင်ကို သူတို့ခုထိရှိန်နေသေးတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်းရုပ်ရှင်ပညာဖြစ်သည်။ ရန်သူကို အဆင့်မြင့်မြင့်ရိုက်ထားကာမှ မိမိတို့နိုင်လိုက်တာ ဂုဏ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာဇာတ်ကားများမှ ကလေးပင်မကြောက်သော ကုတ်အနက်ဝတ် လူကြမ်းများကို သင်မြင်ယောင်လာပေတော့မည်။ သို့နှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ် မော်ကွန်းဇာတ်ကားများကိုသာ အရင်ဘုရင်များ ပြန်ကြည့်လို့ရမည်ဆိုပါက ရှက်လွန်းသဖြင့် ဒေါသထွက်ကာ ယင်းတို့ကိုလူမလေးခွေးမခန့်အောင် လုပ်သော ဒါရိုက်တာများအားလုံး တောင်စွယ်နေကွယ်ပင်မစောင့်တော့ပဲ ကွပ်မျက်ဖွယ်ရှိသည်။
တကယ်တမ်း အဖြစ်မှန်တွေကို ပြည်သူတွေကို ချပြနိုင်မယ့် စစ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းထွက်လာမှာကို အမြဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ စစ်ကားတကားထွက်တိုင်း မြန်မာ့ရုပ်သံမှာစောင့်ကြည့်ပေမယ့် စိတ်ပျက်ဖွယ်ဇာတ်ကားတွေကိုပဲတွေ့နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်ချစ်သော/မွေးကတည်းက ကြီးပြင်းခဲ့ရာ အမိတပ်မတော်ကို လူအမြင်ကတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို အမြဲတွေ့နေရလို့ ကျွန်တော် ဒီဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးကို ရေးသားလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား…..
ထောက်ပြထားတာလေးတွေ အတော်လေး ပြည့်စုံမှန်ကန်လွန်းတာကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ရင်ထဲရှိနေတဲ့ ပြောပြချင်တာလေးတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြသွားတာကတစ်ကြောင်း၊ ငယ်ငယ်ကစစ်သားသားသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး တစ်ချိန်က စစ်သားတစ်ပိုင်းလဲဖြစ်ခဲ့ဖူးတာမို့ မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်ရှုနိုင်ကြစေရန် ထပ်မံဝေမျှလိုက်ရပါကြောင်းနဲ့ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က တပ်မှာ စစ်ကားနှစ်တိုင်းလာရိုက်နေကျက အတွေ့အကြုံလေးကို ကိုယ်ပိုင်ရေးအနေနဲ့ ရေးတင်မယ်စိတ်ကူးထားပါတယ်။
မီဒီယာက ဇာတ်ညွှန်း ကောင်းကောင်းမရိုက်နိုင်တာထက် အစိုးရက မီဒီယာကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားလို့ လို့ ထင်တာပဲ။ အမှန်အတိုင်းတွေရိုက်ပြလိုက်လို့ ဒါရိုက်တာတွေရော၊ ဇာတ်ညွှန်းဆရာတွေရော အငွေ့ပျံသလို ညတွင်းချင်းပျောက် ကုန်မှာပေါ့။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဒီလို မြန်မာ စစ်ကား မစစ်တစစ်တွေကြည့်တော့ ကောင်းမှကောင်း။ မင်းသားတွေက အထင်ကြီး စိတ်ကူးယဉ်စရာ အရာကြီးကြီး စစ်ဗိုလ်တွေ၊ မင်းသမီးတွေက လည်း ချောချောလှလှ။ အားလုံးကို အဆင်ပြေလို့။ ကျမအဖေက အဲဒီစစ်ကား မစစ်တစစ်တွေကို ပေါ်လစီကားလို့ခေါ်တယ်။ ကျမတို့ ကလေးတွေကြည့်နေရင် စိတ်ဆိုးတယ်။ အရေမရ အဖတ်မရ ပေါ်လစီကားတွေ ကြည့်နေပြန်ပြီဆိုပြီး။ တီဗီမှာကလည်း ကိုးရီးယားကားတွေ ခေတ်မစားခင်ကကြည့်စရာရုပ်ရှင်ဆိုလို့ ဒါပဲ ခဏခဏပြတော့ ကြည့်တာပေါ့။
နောင်လာနောက်သားတွေကို ဦးနှောက်ဆေးတာလဲပါတာပေါ့။ ကိုရှုံးတို့လို စစ်အဖြစ်မှန်တွေနဲ့ နီးစပ်ပြီးသားလူတွေ အတွက် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှ မွေးတဲ့ ၈၈နဲ့ မနီးတဲ့လူငယ်တွေ ဆို ဒါတွေပဲ ကြည့်ပြီးကြီးလာတာဆိုတော့ အမှန်တွေ အမှားတွေ ဘယ်ဟာမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားရင် နောက်နှစ်၃၀-၅၀လောက်မှာပဲ အကုန် ဦးနှောက်ဆေးပြီးသား ဖြစ်သွားလောက်ပြီ။
တော်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်တုန်းကတော့ အဟုတ်ထင်ပြီး အထင်တွေကြီးနေတာ။ ဒီလိုကားတွေကြောင့်ပဲ ကျမတို့ ၁၀တန်းအောင်တဲ့ အချိန်က မေဂျာတက္ကသိုလ်တွေလည်း ပိတ်နေချိန်မို့ စစ်ဆေးတို့ စစ်တက္ကသိုလ်တို့ ခေတ်စားလိုက်သေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတင် အများကြီး။ ကျမကိုယ်တိုင်တောင် ဖိုက်တာ ပိုင်းလော့ ဖြစ်ချင်လိုက်သေးတယ်။ ဦးနှောက်ဆေးတာ အတိုင်းအတာတခု ထိတော့ ထိရောက်တယ် ပြောရမလား။ အနည်းဆုံးတော့ ကျမလို ပုဇွန်ဦးနှောက်မျိုးကို ဆေးဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ထင်တယ်။
ကျုပ်တို့ဘော်ဒါ ချာတူလံတယောက်လည်း စစ်ကားရိုက်နေတာ သိပ်ကောင်းဆိုပဲ… ဘာကောင်းတာလဲ မေးကြည့်အုံးမပါ…..
ဒါပေမယ့် အထက်ကပြောသွားတဲ့ ကျူပ်နာမည်နဲ့ အိုက်ဇက်ကားဒွေ ကျူပ်ရိုက်တာမှုတ်ဝူး
ကျုပ်အခုရိုက်မယ့် `ဒလဟာဘာ´ ကိုဇက်ညွှန်းရေးနေတယ် … မင်းသားမင်းသမီးတွေလဲရွေးပီးပီ
ဂျို့ စ်ကြောင်နက် (Josh Catnett)
ဘင်န်မိုက်ကယ်အောင်ပု (Ben Michael Aungpu)
ကိတ်ဘယ်ကင်ရွှေအိ (Kate Beckinshweei) တို့ကို ကမ်းလှမ်းထားတယ် …
ကျုပ်၂နှစ်ကျော်ကျော် ၃နှစ်လောက်အချိန်ယူပီး ဂဘာနဲ့ယှဉ်နိုင်အောင်ရိုက်မယ် … ကမ်းမင်းဆွန်းးးးးးးးး
ဟိဟိ နံမယ်ပိုင်ချင်ဒွေ ခွင့်လွှတ်နော်!! ချရို့စတာ ..
ဟိန်းဝေယံတို့ ဗိုလ်မှူးအပွင့်တပ်ပြီး နေပြည်တော်မှာ ဖွန်ကြောင်နေတဲ့ပုံထက် တကယ့်စစ်မြေပြင်က အခြေအနေကို လူတွေသိအောင်ရိုက်ပြသင့်ပါတယ်။
သဘောကျလွန်းလို့ Highlight လုပ်ပါရဇီခညာ။ :harr:
မှန်ပါတယ် ထောက်ခံပါတယ်………ဒါ……ဒါပေမဲ့ လည်းလေ ဟိန်းဝေယံ ထက် ဆိုးတဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်
(MA TA SA)ခု…. ခု…… နောက်ပိုင်းပေါ့လေ..
သွေးထွက်အောင်မှန်ပါ့ ပြောချင်နေတဲ့စကားလုံးတွေကို စိတ်ချင်းတူ ကျွန်တော့ကိုယ်စားပြောပေးသွားလို့ 
တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း.. သတ်ကြတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေထဲက.. စစ်သားတွေဘ၀…
ဘယ်လိုရုပ်ရှင်ရိုက်ရိုက်.. .ရုပ်သေရိုက်ရိုက်..(ကျုပ်အတွက်ကတော့). ကြည့်ကောင်းမယ်မထင်မိဘူး..။
တပ်မတော်က.. နိုင်ငံရေးထဲဝင်ရှုပ်နေတာကလည်း.. ရည်ရွယ်ချက်လမ်းမှားနေတာမို့.. သူတို့ဘ၀ခံစားနားလည်ပေးလို့မရဘူး..
မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေ.. ယူအန်င်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်မှာတာဝန်ထမ်း.. ကမ္ဘာ့/မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးထိမ်းသိမ်းသူဖြစ်တဲ့နေ့ရောက်မှ… :harr:
ကျုပ် အလယ်ဗင်းကို ကျုပ်ကိုယ်ဒိုင်ဖြတ်ပျစ်မယ်
Obama’s “WAR IS PEACE” speech (edited to9minutes) – YouTube
Dec 12, 2009 – Uploaded by islandonlinenews
President Barack Obama delivers his Nobel Lecture after accepting the Nobel Peace Prize at Oslo City Hall …
အကုသိုလ်ဖြစ် သော ကြောင့်